Liiska fikradaha markii la abuurayo astaanta | Abuurista khadka tooska ah
Liiska fikradaha markii la sameynayo astaan
Pablo Gonder | | Design Graphic, Dhiirrigelinta, Tababarada
Liiska fikradaha waqtiga naqshadeyso astaan si looga dhigo sumadeena inay si sax ah u shaqeyso oo ay u gaarto tiro badan oo isticmaaleyaal ah mahadnaqa a xiriir wax ku ool ah, waa in aynaan ilaawin in sawirka shirkaduhu udhaqmayo si taas ah matalo waxa aan nahay si aan ugu dhaqmo sida dharka aan xirno maalin kasta.
Arrintan post Waxaan arki doonaa kiis wax ku ool ah oo ah muuqaal shirkadeed iyadoo ujeedadu tahay in lagu barto aqoonta asaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah waqtiga abuur sawir shirkadeedXaaladdan oo kale, waxaan ka hadli doonnaa tusaalahan tusaala ah iyo xiriirka fikradaha ka dambeeya.
Kahor intaanan bilaabin sameynta sawir shirkadeed waa inaan si cad u qeexnaa waxa aan nahay iyo waxa maxaan rabnaa inaan la xiriirno, Tani waa halka laga helo tallaabada ugu horreysa ee lagu abuurayo sawirkeenna garaafka leh. Ka dib markaan si cad u ogaanay tan waa goorta aan ka bilaabi karno qaybta garaafka, Tan ka hor waxaan kaliya ka shaqeyn doonnaa qeybta teori.
1 TALLAABOOYINKA LOOGU ABUURAYO MUUQAAL SHAQO LEH
1.1 Ogow astaantaada
1.2 Raadi xiriiro iyo isku xirnaan
1.3 Abuur sawir iyo khariidad tixraac ah
1.4 U turjun luqadaha: luqadda fikradda ah illaa luqadda garaafka
2 SHAQAALAHA SHARCIYADA SHAQADA: BARASHADA KIISKA
2.1 Maxay tahay inuu muujiyo sawirka shirkadda 'Dox'?
TALLAABOOYINKA LOOGU ABUURAYO MUUQAAL SHAQO LEH
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan qorno astaamaha sumadeena oo naga dhig taxane dhan oo ah su'aalo inay naga caawiyaan sidii aan ku gaari lahayn nuxurka cidda aan nahay: maxay astaanteydu qabataa? Maxay qabataa? Maxay tahay ujeedooyinkeedu? Xagee sumadeyda u dhaqaaqdaa?
Raadi xiriiro iyo isku xirnaan
Waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah raadso cilaaqaad leh fikradaha dhammaan noocyada kala duwan ee naga caawin kara aqoonsiga sumadeena. Qaybtani waa lama huraan in la helo a isgaarsiin hufan oo si sax ah u shaqeeya: waa maxay summaddeennu? Ma leedahay wax qiimo ah oo taagan? Miyay la xiriiri kartaa sumad jirta Qaybtaan waxaan ku raadin doonnaa xiriirkaas oo aan hadhow ku horumarin doonno qeybta garaafka, tusaale ahaan haddii sumadeena ay u heellan tahay adduunka bey'ada waxaan raadin doonaa xiriiro inay ku dhexjiraan dunidaas cagaaran. Qeybtaan waxaa isticmaalka sawirada Wax badan ayey ka caawisaa sidii loo dhisi lahaa xiriir ka kooban oo si wax ku ool ah u shaqeeya.
Un ejemplo waxay noqon laheyd tan:
Shirkadeena waa cagaar laakiin leh taabasho soo jiidasho leh. Xaaladdan oo kale, waxaan raadin doonnaa xiriir lala yeesho adduunka cagaaran laakiin sidoo kale adduunyada raaxada, waxaa loo turjumay qaab ahaan waxay noqon kartaa sidan soo socota: cagaar + midabyo dahab ah. Marka laga eego dhinaca garaafka ee aragtida haa waxaan la xiriirnaa tan sawirrada waxaan ka hadli laheyn caleemaha, dheeman, dahab ... iwm. Waxay ku saabsan tahay raadinta cilaaqaadkaas.
Abuur sawir iyo khariidad tixraac ah
Raadi sawirro la xiriira astaantaada oo la abuuro khariidad muuqaal ah oo si fiican kuugu hagta horumarka sawirkaaga shirkadeed. Ku khariidado muuqaal ah waxay had iyo jeer naga caawiyaan inaan ugu shaqeyno qaab fudud oo wax ku ool ah maxaa yeelay waxay naga caawinayaan inaan abuurno isku xirnaanta waxyaabahaas.
U turjun luqadaha: luqadda fikradda ah illaa luqadda garaafka
Luqadda fikradeed ee aragtida ahi waxay noqon kartaa u turjun aduunka caaga ah, Shaki la'aan tani waa qaybta ugu dambeysa ee mashruuc kasta oo naqshadeyn ah, maadaama ay lama huraan tahay in dhammaan macluumaadkeenna aragtida guud ee illaa iyo hadda la soo aruuriyay ay u arkaan iftiinka garaaf ahaan. Si tan loo sameeyo waxa ay tahay inaan sameyno ayaa ah raadso isku ekaanshaha inta udhaxeysa macluumaadka teori iyo aduunka sawirada, qaababka iyo midabada. Tusaale ahaan, haddii sumadeena ay u heellan tahay adduunka isboortiga, waa inaan ka fikirnaa xariiqyo dabiici ah oo wanaagsan oo kiciya dhaqdhaqaaqa, midabbo xoog leh oo gudbiya tamarta ... iwm. Qaybtani waa inay marwalba lahaato miirayaal badan: Tusaale ahaan, haddii sumadeena isboorti ay tahay mid qaali ah, waa inaan aad uga taxaddarnaa marka aan isticmaaleyno midabada cufan maxaa yeelay meel bay ka ahaan lahayd
SHAQAALAHA SHARCIYADA SHAQADA: BARASHADA KIISKA
Hadda waxaan arki doonnaa wax yar oo ka mid ah waddada horumarinta muuqaalka shirkadaha DOX
Dox waa kanaal ka mid ah Youtube bixinta shaqaalaha Naqshadeynta iyo farshaxanka, ficilkeeda ugu weyn waa inay bixiso qalabka maqalka habka tababarka ee madal Youtube.
Maxay tahay inuu muujiyo sawirka shirkadda 'Dox'?
Waxay ku saabsan tahay meel ka kooban waxyaabo badan: kiiskan waxaan diiradda saaraynaa fikradda ah sanduuq ama weel taas oo wax dhigata. Taas ka dib, xiriir lala yeesho magaca sumadda ayaa la raadiyay, fikradda ah sanduuqa (sanduuqa) fikradda dox (sanduuqa naqshadeynta) adoo beddelaya mid ka mid ah xarfaha waa suurtagal in la muujiyo taas muuqaal fikradeed.
Isbeddelkan fudud ee ereyga asalka ah waxaad ku timid wanaag natiijada asalka iyo taageero fikradeed.
Waxa ku xigay ee la qabtay waxay ahayd in la abuuro qaybta muuqaalka muuqaalka ah ee astaanta, tan waxaan u dooneynay inaan ku matalno fikradda sanduuqa qaab aad u muuqata oo ujeeddadeedu tahay ujeedka in lagu muujiyo fikraddaas qaab xeel dheer.
Mar kasta oo aan ka shaqeyno muuqaal shirkadeed waa inaan si cad uga ogaanno waxa ku saabsan xiriirka fikirka isgaarsiinta wax ku oolka ah, raadso qiil Wax kasta oo aan sameyno, qaabeynta, waxba yaan loo dhaafin fursad. Isticmaalka qaababka, midabada, farta waa in lagu saleeyaa baahiyo taxane ah oo aan horey u ogaanay, haddii shaqadii hore sifiican loo qabtay waxaan horey uheynay kala bar shaqadii la qabtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Liiska fikradaha markii la sameynayo astaan
Hal-abuurka qaar ka mid ah tattoos-yada ku dhaca laf-dhabarka